Mugabe: Rivals 'can commit suicide if they wish'
Zimbabwe president Robert Mugabe has declared his party will not yield its victory in disputed elections and proclaimed he has disposed of his main political rivals “like garbage.”
Human rights losing out in Zimbabwe
The role of election monitors will be vital to ensure free and fair elections in Zimbabwe, writes Mary Lawlor
Tsvangirai: I'll run against Mugabe
Zimbabwe’s prime minister said he would run against Robert Mugabe in presidential elections expected next year and called for an army of peacekeepers to protect voters.
Zimbabwe opposition insists on ‘equitable’ deal
Zimbabwe 'close to collapse'
Zimbabwe boycott threat
African summit planned to break Zimbabwe power deadlock
Zimbabwe’s neighbours will hold a summit to try to resolve the southern African nation’s power-sharing impasse.
Tue, 28 Oct, 2008
Peace deal outlined for Zimbabwe
South African leaders tonight urged negotiators to build on the basis for a power-sharing agreement to resolve the political crisis in Zimbabwe.
Sun, 17 Aug, 2008
Deal expected as Zimbabwe begins talks on unity government
Senior negotiators from Zimbabwe’s main opposition Movement for Democratic Change (MDC) and the ruling ZANU-PF party began talks yesterday and a report indicated they were close to reaching a deal on forming a unity government.
Fri, 25 Jul, 2008
Opposition welcomes Zimbabwe mediation plan
South African President Thabo Mbeki announced plans to work closely with the UN and the African Union as he attempts to mediate a settlement in Zimbabwe.
Sat, 19 Jul, 2008
Mugabe supporters attack farmers
White farmers protesting over their land being seized were attacked by Robert Mugabe’s supporters the same day he was sworn in as Zimbabwe’s president, it emerged today.
Mon, 30 Jun, 2008
Zimbabwe delays presidential election run-off
The presidential run-off pitting President Robert Mugabe against opposition leader Morgan Tsvangirai will not be held in the next few weeks as required by law, the head of the electoral commission said in an interview published today.
Sun, 11 May, 2008
African leaders discuss Zimbabwe without Mugabe
Southern African leaders met urgently today to address the deepening crisis over Zimbabwe’s contentious presidential election, but had little chance to put pressure on President Robert Mugabe, who skipped the emergency summit.
Sat, 12 Apr, 2008
Brown ups pressure on Mugabe
Gordon Brown upped the pressure on Robert Mugabe over Zimbabwe’s presidential election today, demanding the results be published immediately.
Botswana a role model for African countries
FOLLOWING the disputed elections in Kenya, in which approximately 1,000 people were killed and hundreds of thousands were displaced from their homes and livelihoods, there is still no functioning Kenyan government.
Mugabe bans political demonstrations
Political rallies were banned in Zimbabwe from today as the country’s crisis deepened.
Fri, 11 Apr, 2008
Zambia to host summit in hope of breaking poll deadlock
THE Zimbabwe opposition’s bid to build up pressure on Robert Mugabe, after disputed polls bore fruit yesterday as plans were unveiled for a weekend summit to discuss the escalating crisis.
Thu, 10 Apr, 2008
Call for African leaders not to punish Mugabe
Zimbabwe’s presidential spokesman called on African leaders not to punish him for the country’s troubles, repeating Robert Mugabe’s charges that the West was to blame.
Thu, 29 Mar, 2007
African leaders gather to discuss Zimbabwe
Southern African leaders will begin emergency talks in Tanzania today on the political turmoil in Zimbabwe.
African leaders gather to discuss Zimbabwe crisis
Zimbabwe’s political turmoil is to top the agenda at an emergency meeting of southern Africa leaders in Tanzania.
Wed, 28 Mar, 2007
Mugabe hits back over new wave of criticism
Zimbabwe’s President Robert Mugabe said today he took “great exception” to the support given by Western nations to what he called violent opposition politics in his southern African nation.
Thu, 15 Mar, 2007
UN: More than 10 million starving in Africa
More than 10 million people in six southern African countries are in urgent need of food and other help after another year of erratic rainfall, UN agencies and the Southern African Development Community said.
Fri, 08 Jul, 2005
More than 10 million people in six southern African countries are in urgent need of food and other help after another year of erratic rainfall, UN agencies and the Southern African Development Community said today.
Thu, 07 Jul, 2005
Free and fair Zimbabwe election ‘highly unlikely’
FIVE years of violence, intimidation, voting irregularities and restrictive legislation have slanted Zimbabwe’s electoral playing field in favour of President Robert Mugabe, Human Rights Watch said in a report issued yesterday.
Tue, 22 Mar, 2005
Zimbabwe opposition boycotts elections
Zimbabwe’s main opposition Movement for Democratic Change said today that it will boycott all future elections until Zimbabwe’s government reforms unfair electoral laws, ends political violence and repeals repressive media and security laws.
Wed, 25 Aug, 2004
South African nations discuss trade and HIV
Reducing trade barriers and fighting the spread of HIV top the list of issues leaders from a southern African trade bloc plan to discuss at their annual summit.
Mon, 25 Aug, 2003
African nations condemn 'unfair' Zimbabwe election
The Southern African Development Community has accused the Zimbabwean Government of failing to create free and fair conditions for last weekend's presidential election.
Fri, 15 Mar, 2002
Southern Africa tries to resolve Zimbabwe deadlock
Southern Africa tried today to resolve a deadlock between Zimbabwe and the European Union over the deployment of election observers.
Wed, 13 Feb, 2002
Mugabe agrees to free and fair elections
Zimbabwean President Robert Mugabe says he will ensure March's presidential elections are free and fair.
Tue, 15 Jan, 2002
South African leaders tackle issues of wars
Southern African leaders are gathering in the Malawian business centre to seek ways of ending wars in Congo and Angola and turmoil in Zimbabwe, where ruling party militants have seized hundreds of white-owned farms.
Mon, 14 Jan, 2002
Watch: Trinity fox Sam welcomes cubs
Cork’s northside gets a Groovee new Grove as hundreds of native Irish trees planted
Man jailed for stealing bottle of vodka and two packs of sausages
DUP minister attends north-south meeting after two no-shows
Wednesday, April 21, 2021 - 10:00 AM
Carphone Warehouse to close all its Irish stores
Wednesday, April 21, 2021 - 12:00 PM